‘मलंग’ले ४ दिनमा कति कमायो ? - Dainik Online Dainik Online
‘मलंग’ले ४ दिनमा कति कमायो ?
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७६, मंगलबार ७ : ४४
काठमाडौं । आदित्य रोय कपुर र दिशा पटनीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘मलंग’ अहिले हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । रिलिजको पहिलो दिन अर्थात् शुक्रबार कमजोर व्यापार गरेको यस चलचित्रले शनिबार र आइतबार भने सन्तोषजनक व्यापार गर्न सफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
शुक्रबार चलचित्रको कमाई ६ करोड ७१ लाख थियो । शनिबार भने चलचित्रले ८ करोड ८९ लाख कमायो । आइतबार झनै चलचित्रले राम्रो दर्शक पायो र ९ करोड ७६ लाखको व्यापार गर्‍यो । तर, सोमबार भने चलचित्रले जम्मा ४ करोड ४ लाख जम्मा गर्न सक्यो । यस हिसाबमा चलचित्रले चार दिनमा जम्मा२९ करोड ४० लाख कमाएको छ ।
‘मलंग’लाई यस वर्षको प्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा हेरिएको थियो । चलचित्रको प्रचार सामग्रीलाई दर्शकले रुचाएका थिए । त्यसैले चलचित्रले राम्रो सुरुवात गर्ने धेरैको आकलन थियो । तर, चलचित्रले सोचे जस्तो दर्शक पाएन । यति हुदाँ हुदैँ पनि ‘मंलग’ आदित्यको सबैभन्दा बढि इनिसियल व्यापार गर्ने चलचित्र बनेको छ ।
आदित्यको चलचित्रले आजसम्म पहिलो दिन ६ करोड माथिको व्यापार गर्न सकेको थिएन । मोहित सुरीको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्रमा अनिल कपुरको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ ।
१२ को परीक्षा सकिएपछि साथीहरुलाई करिष्माले भनिन्ः ‘अब ब्याचलरमा भेटौंला’
प्रेमी शरद केडियाले गायिका इन्दिरालाई यसरी राखे विवाह प्रस्ताव (फोटो/भिडिओ)
करिना कपुर सीता बन्न नपाउँदा‍..
शाहरूखले बाल्कोनीबाट मोबाइल झारेपछि..
दीपकराज र दीपाश्रीसँग मिलेर ‘कालो कोट’ बनाउँदै रोहित अधिकारी